अरुणिमा... | मझेरी डट कम
Deep Raj Sharma — Fri, 08/23/2013 - 19:38
मुलुक श्रावण माहको वर्षाले नुहाइरहेको थियो । म पनि नुहाउँदै-नुहाउँदै धनकुटा पुगेछु । पाखाहरू रुझेका थिए, सडक पनि रुझेका, असीमित चाहनाले मन पनि रुझेको । लालीगुराँस बारीका कान्ला-कान्लामा मुस्काइरहेका थिए, सडक छेउ ती सल्लाका बोटहरू पनि श्रावणको यस सुन्दर वातावरणमा रमाइरहेका थिए, तिनका हाँगाहरू देख्ता लाग्थ्यो मानौं कुनै युवतीले भर्खर स्नानपछि आफ्ना केशहरू फिँजाएर स्नान-घरबाट बाहिर निस्केकी हो ! ती सल्लाका बोट उन्मादित थिए, कता-कता पिरतीमा गाँसिन पुगेछु म तिनीहरूसित । म नारायण गोपाल गीत सुन्दै अघि बढें, 'साउनको झरी बनी तिमी आऊ न..'।
बिस्तारै पारी-पाखाको हुस्सु, त्यहाँबाट पलायन भएर अन्तै सर्यो । पारीको हरित पाखा देख्दा मन उज्यालो भयो । मगजका तन्तुहरूले स्पन्दन गर्न थाले, अनायासै। अरुण किनारको यस पवित्र भूमिउपर बसेर ईशको आराधनामा म रमाउन चाहन्थे । मरुका कणहरू वर्षाले गर्दा ओस्सिएका थिए । ढुङ्गाहरू चिसा भएका थिए । सूर्योदय कामना गर्दै चरा-चुरुङ्गी ओत लागेर चिर्वीर गर्दै थिए.... ।
मेरो ध्यान भङ्ग गर्न भनीं यौटा स्त्रीले अरुण नदीको पल्लो छेऊ नृत्य गर्न थाली । उसको पाउजुको स्वर सुनेर म उसप्रति लालायित भएँ । मलाई अरुण पारी जान मन लाग्यो । तर, म पारी कसोरी पुग्न सक्थें र त्यस दम्भित जलवेगलाई चिरेर ? ऊ मसमीप आउन थाली, अरुणको उग्र जलवेगमा पौडी खेल्दै । म त्रसित भएँ । अनायासै म चिच्याएँ, "आफ्नो ज्यानको माया छैन तिमीलाई ?"
अर्को क्षण त्यो स्त्री मेरो बाहुपाशमा बेरिन पुगेकी थिई । उसलाई देख्ता मलाई यस्तो लाग्यो, मानौं हाम्रो जन्म-जन्मान्तरको साइनो छ । मैंले प्रश्न गरें, "तिमी को हौं ?"
"म अरुणिमा", उसले भनीं, "अरुण-नदीकी पुत्री अरुणिमा!"
प्रकृतिको यो कस्तो उपहार ! अर्को क्षण पुन: वर्षा हुन थाल्यो र मैंले अरुणिमालाई चुम्बन गर्न थालें, बेहद नै रसीला चुम्बन! मेरो शरीर शिथिल हुन थाल्यो । मैंले सुस्केरे लवजमा उसलाई प्रश्न गरें, "मसँग विवाह गर्छ्यौ ?"
उसले मेरा अधरहरूलाई आफ्ना हत्केलाले थिचेर भनीं, "हाम्रो विवाह सम्भव छैन । म एक साधारण मछुवारिन, माछा मारेर जीविकोपार्जन गरिरहेकी छु । तँपै हुने-खाने ब्रहामण देखिनुहुन्छ...."
"मन मिलेपछि जातको के कुरा भो र अरुणिमा! "
"ठिक छ", उसले भनीं, "मा आफ्नो पिताजीसँग अनुमति लिएर आउँछु ।"
ऊ अरुणको तटऊपर पुगी र फर्केर मतर्फ हेर्दै मुस्काई । मैंले पनि प्रतिउत्तरमा मुस्काइदिएँ । अरुण नदीबाट यौटा ठुलो छाल बगेर त्यस तटउपर आइपुग्यो, जसले अरुणिमालाई आफ्नो वेगसँगै बगाएर लग्यो । म चिच्याएँ, "अरुणिमा! अरुणिमा!!"
अरुणिमाले ठुलो स्वरले अट्टाहास हाँस्दै भनीं, "म अरुणिमा हूँ, अरुणिमा! अरुण पुत्री अरुणिमा । मलाई यहाँ कसैको डर छैन, कसैको डर छैन......"